I-Solar Street Lights Inkampani | MAYELANA NATHI | UGoldsuno
I-Shenzhen Goldsuno Opto-electronic Techonology Co. Ltd.
Itholakala esiFundeni saseLonghua, eShenzhen, esifundazweni saseGuangdong, eChina, eduze kwegalse yomhlaba eyakhe kakhulu emhlabeni (iGuanlan Golf Course) Le nkampani yasungulwa ngonyaka we-2008 futhi inezisekelo ezi-2 zokuqinisekisa imanu Imboni yokuqala eyomkhiqizo we-LED Lighting R& D, ukwakhiwa, ukuhlangana nokuhlolwa; Imboni yesibili ingeyokwakhiwa kwesikhunta somkhiqizo kanye negobolondo le-manu-factor. Ekuqaleni kuka-2019, sasungula ifektri eBangkok, eThailand, enesilinganiso esiphelele esingaphezu kwamamitha-skwele ayi-10,000. Ukukhiqizwa kuhambisana ngokuqinile nohlelo lwekhwalithi yamazwe omhlaba lSO2015.
Olayini abakhulu bomkhiqizo bafaka ukukhanya kwe-LED kwangaphakathi njengamalambu aphansi, amalambu ephaneli namalambu ophahla. Imikhiqizo ye-LED yangaphandle ehlanganisa amalambu emigwaqo elanga ahlanganisiwe, amalambu e-landscape namalambu odonga. Imikhiqizo ithunyelwa eNyakatho Melika, eYurophu, eningizimu-mpumalanga ye-Asia nakwamanye amazwe nezifunda, ngomthamo wokuthengisa waminyaka yonke wamasethi angaphezu kwezigidi ezintathu, futhi amukelwa kahle ngamakhasimende emhlabeni wonke.
Sithanda ukuxoxa ngephrojekthi yakho, izidingo zakho, kanye nanoma isiphi isabelomali ozama ukuhlala kuso. Sizothola isixazululo esifanele kangcono izidingo zakho. Zizwe ukhululekile ukugcwalisa ifomu lokubonisana elingezansi, futhi isazi sokukhanyisa sizobuyela kuwe kungakapheli amahora angama-24. Noma ungashayela ngqo ku- + 86-18819261803 ukukhuluma nesazi sokukhanyisa.
Uma Unemibuzo Engaphezulu, Sibhalele